Deredza Kushandisa Kupisa - Mazano Anoshanda Kuchengeta | Bezzia
Deredza Kushandisa Kupisa: Mazano Anoshanda Ekuchengetedza
Susana godoy | 02/12/2021 14:00 | Musha
Deredza kupisa kushandiswa harisi basa riri nyore nguva dzose. Kana nguva yechando ichiuya nekudziya kwayo kwakadzikira, tinogara tichiisa kudziyisa pamazuva mazhinji tinenge tiri pamba. Asi ichokwadi kuti gore rino, tichafanirwa kudzvanya zvishoma kuti tikwanise kuchengetedza.
Mitengo iri padenga uye ndicho chikonzero nei tichifanira kusarudza dzimwe nzira dzekuedza kuchengetedza zvakanyanya sezvinobvira. Saka, tinokusiira iwe nhevedzano yemazano anoshanda ayo anozokuchengetedza iwe kupfuura iwe zvaunofunga. Ziva zvavari!
1 Vhura mahwindo ako kubva kunotonhora
2 Reflective panels pane radiators
3 Makobvu maketeni kuderedza kudziyisa kushandiswa
4 Usambofa wakavhara ma radiator
5 Enda kune mavara anodziya
6 Magumbeze emasofa
Vhura mahwindo ako kubva kunotonhora
Kunyange zvazvo tichifunga kuti mahwindo akavharwa zvakanaka, zvingadaro kuti dzimwe nguva kuvharwa kwawo hakushandi sezvatiri kufunga. Saka kana tikaisa kupisa, kurasikirwa kwekupisa kuchaitika nenzira iyi uye semugumisiro, tichapedza simba rakawanda. Saka isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti dzakaiswa insulated. Sei? Tinogona kugara tichiisa chisimbiso pairi. Iwo ari nyore kwazvo kurova uye izvi zvinochengeta kutonhora kunze chete uye kuti imba yedu inogona kuve nekudziya kwakakosha kuti inakirwe nenharaunda inonakidza.
Reflective panels pane radiators
Imwe yemazano anonyanya kushanda ausingakwanise kupotsa ndeiyi. Ndezve isa nhevedzano yeanoratidzira mapaneru kumashure kwema radiator. Izvi zvinoreva kuti simba ravo rinowedzerwa uye kuti isu tiri kuchengetedza ingangoita 20%. Saka isu tave kutotaura nezve chimiro chakanaka chekuchengetedza. Saka, pakuedza, hazvikuvadzi. Iwe uchave nekupisa kwakawanda pasina kuve nekusimudza kudziyisa kwako.
Makobvu maketeni kuderedza kudziyisa kushandiswa
Ichokwadi kuti nhanho imwe neimwe inokosha uye ndicho chikonzero kana takambotaura nyaya yekuvhara hwindo, ikozvino ndiyo kutendeuka kwemaketeni. Nokuti muzhizha vanotidzivirira kubva kune zuva, kudzivirira kubva pakuparara kwefenicha kana mukati muhuwandu, asi ikozvino muchando tinoda zvakasiyana. Ndiko kuti, masikati tinogona kuvabvisa kuitira kuti chiedza chezuva chipinde uye chinopisa nharaunda. Asi kana husiku hwauya zvinogara zviri nani enda kune makobvu uye mamwe machira akajeka, iyo yatichavhara uye ichabatsira kuchengetedza kupisa kunowanikwa mukati mezuva.
Usambofa wakavhara ma radiator
Dzimwe nguva tine tsika yekuisa chimwe chinhu pazviri, sembatya dzisina kuomeswa, kana kuva nefenicha kana zvinhu zvekushongedza zviri padhuze. Izvi zvinoita kuti kushandiswa kwesimba kuve kwakanyanya, saka yeuka kuti ivo vanofanirwa kuve vakasununguka kuitira kuti vagone kugadzira kupisa kunozadza imba yese pasina kukanganisa. Saka, yeuka kusaavhara kuti uwane kudziya kwakawanda asiwo mari yakawanda.
Enda kune mavara anodziya
Hazvirevi kuti iwe uchafanira kushongedza imba yako, asi unogona sarudza kuwedzera toni dzinodziya dzinochengetawo kupisa ikoko kwenguva refu. Vamwe vanhu vanoenda kune rima mimvuri, asi iwe unogona zvakare kuenda kune mamwe mavara anopenya seorenji kana yero. Asi ivo havazongove nemhedzisiro mumba medu, asi ivo vanozoita kuti muviri wedu uvagamuchire nekudziya kwatinoda kuwedzera tembiricha yedu.
Kana tiri pamba tichitsvaira kana kubika hatizoone kutonhora kwakanyanya nekuti kana tave kufamba kunopera nekukasika. Asi ichokwadi kuti kana tagara pasofa tosimuka zvinotora nzvimbo yedu. Naizvozvo, hapana chakafanana tichizvirega tichitakurwa nemagumbeze anodziya kwazvo, iyo yaunogona kuwana munzvimbo dzakawanda. Kugara zvakanaka, nembatya dzakakodzera uye magumbeze sezvatataura, ndeimwewo sarudzo yekushandisa kuitira kuderedza kupisa kwekupisa. Ehe, mune dzimwe nzvimbo dzinotonhora, zvinogona kunge zvisina kukwana uye isu tinofanirwa kuita zvekuisa kudziyisa kwenguva yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Deredza Kushandisa Kupisa: Mazano Anoshanda Ekuchengetedza
3 matipi eiyo radical makeover
6 nhau dzemimhanzi dzaunogona kuteerera kuna Zvita uno